Radanoara Julien: “Mety misy kandidà manadio vola…” | NewsMada
Radanoara Julien: “Mety misy kandidà manadio vola…”
“Eto amintsika, tsy takona afenina fa vahiny mamatsy mpanao politika, indrindra ireo mirotsaka ho filohan’ny Repoblika. Sarotra be ny hamakafaka hoe iza no izy? Nefa indraindray koa, mety misy ny fanadiovana vola maloto avy any ananona any.”
Izay ny fanehoan-kevitry ny mpahay fifandraisana iraisam-pirenena, Radanoara Julien, ny amin’ny fiavian’ny vola ampiasain’ny kandidà sasany amin’izao fifidianana izao, mety misy fanadiovana vola maloto.
Anjaran’ny Vaomiera natsangana hanara-maso ny fampiasam-bolan’ny antoko ny mijery izay. “Raha ny olon-tsotra tsy afa-kiteny hoe manao an’izao na izatsy Ranona. Sarotra be izany”, hoy izy.
Misy hatrany ny manohana kandidà
Misy ny tena manam-bola tokoa amin’ireo kandidà, misy mampiasa vola any ivelany. Ny orinasa goaibe eto amintsika koa, mety misy mamatsy, ny masoivoho isan-karazany… Maro ny zavatra mety mitranga.
“Misy, ohatra, ny masoivoho manana tombontsoa eto amintsika, mitady izany koa: na Sinoa izany, na Rosianina, na Frantsay, na Amerikanina, na Arabo aza”, hoy ihany izy. Misy dikany avokoa, ohatra, ireny moske natsangana eran’ny tanàna tato ho ato ireny. Manana ny kandidàny koa izy iarovana ireny.
Mila fitantanam-bola mazava ny fangaraharahana
Raha manao fangaraharana, misy kaonty ara-dalàna ny sasany amin’ny fidiram-bola ampiasaina amin’izany. Misy olona ampitondraina izany, na orinasa tsotra na orinasa goaibe eran-tany izay misy eto amintsika. Mety mifampiraharaha amin’ireny ny olona amin’izay hifanarahana, rehefa tonga eo amin’ny fitondrana izy: honerana ny vola, na fifanarahana amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto, ohatra. Misy fomba dia be dia.
Tsy voaara-maso, ohatra, ny fidirana sy fivoahan’ny olona eto amintsika. Tratran’ny kolikoly avokoa ny ankamaroan’ny manao fanaraha-maso eto amintsika. Noho izany, sarotra ho an’ny rehetra ny mampiditra sy mamoaka izany eto amintsika.